Teo aloha ny Blockstream mpandraharaha mamorona ny supercomputer amin'ny blockchain - Tray News - Blockchain News
Ben Gorlick sy Johnny Dilly nandao ny ekipa Blockstream ny mpandraharaha hiasa amin'ny ny tetikasa ny décentralisées rahona solosaina vahoaka Machine. Gorlick no tale ara-teknika, ary Dilli no lohan'ny rafitra maritrano.
Ny mpandraharaha dia mino fa ny rahona computing mila fanatsarana ny rafitra, ary Vahoaka Machine blockchain manolotra vahaolana. Nisy rahona décentralisées solosaina hanao ny dingana fampiharana ny famoronana ao amin'ny misy haingana kokoa sy mora vidy kokoa Blocker: “Inona no miasa eo dia hanova ny fitsipika izay ny rindrankajy noforonina sy mihazakazaka,” Gorlick hoy in-dresaka miaraka amin'ny Coindesk.
Ny tetikasa dia midika orinasa maro izay ao amin'ny lisitry ny Fortune 500 orinasa, anisan'izany GE sy Anthem. Amin'izao fotoana izao, mpandraharaha no mizaha toetra ny rafitra eo amin'ny fampiharana ny sakana Ethereum.
Amin'ny maha-mpikambana taloha tao Blockstream, Ben Gorlik mahita ny olana sy ny zava-misy fa ny tena sarotra ny mampiasa milina blockchains hamoronana bebe kokoa azy ireo mifototra amin'ny vokatra. Milaza ny fitsipiky ny rafitra vaovao, dia mitanisa ny fangatahana-kalandrie. Matetika no naorina amin'ny rahona toy ny sehatra Google Cloud na Amazon Web Services. Fa isaky ny mpampiasa dia miasa, ny sarany dia voampanga avy amin'ny developer. Gorlick dia mino fa ity tontolo ity dia “bottleneck”, izay mitondra any amin'ny avo vola lany.
Ny fahombiazan'ny Vahoaka Machine dia noho ny zava-misy fa ny mpampiasa ny asa tapaka ho maro, ary avy eo niova ho amin'ny tambajotra ny fitaovana, tsirairay izay tafiditra ao amin'ny fanodinana. Noho izany, ny fampiharana manomboka sy mitantana ny fandaharana, fa ny mpampiasa dia tsy mifamatotra amin'ny mpamatsy iray.
koa, mpampiasa ny fampiharana dia ho afaka ny hahazo valim-pitia noho ny fandefasana ny fandaharana rehetra karazana fitaovana: solosaina, smartphone ary na fitaovana “Internet-javatra”. Ny solosaina dia mampiasa ny hevitra iray “mafy federasiona”, izay Gorlick sy Dilly voaforona tao amin'i Blockstream. Tsy manome antoka fa ny nodes hanao ny fehezan-dalàna araka ny tokony ho.
Mandritra izany fotoana izany, Vahoaka avy Machine-monina mpandraharaha fampiharana aza tsy tokony ho fantatra momba ny fandaharana: Vahoaka App Studio mamela anao hamorona fampiharana mampiasa ny lahatsary interface tsara eo amin'ny harato tarihiny-ary-fomba mitete.
“Manoratra fifanarahana manan-tsaina toa mampatahotra. Mila hanala sakana”, Ben mino Gorlick.
Noho izany, mba hamoronana fifanarahana Ethereum marani-tsaina tsy manam-pahalalana izay azo atao ny teny fandaharana hamafy. Ary amin'ny hoavy dia ny fanompoana hanohana fandaharana hafa fiteny, anisan'izany Script bitcoin.
🔥NordVPN 70% NIALA: Sokajy://bit.l...
Previous Post:deVere Group nandefa cryptocurrency varotra fampiharana
Next Post:Ao amin'ny firenena samy hafa, Mety tsy hitovy ny vidin'ny bitcoin